यस्तो छ कोरानो संक्रमित नर्सको मार्मिक अनुभव [नालीबेली] – Rapti Khabar
८ भदौ, काठमाडौं । ‘हामीलाई विचरा नलेखिदिनुस् । संक्रमितलाई विचराका रुपमा प्रचार नगरिदिनुहोला’, कुराकानीको अन्त्यमा स्टाफ नर्स रञ्जिताले भनेकी थिइन् ।
पक्कै पनि कोरोनाले दुनियाँलाई आक्रान्त बनाएका बेला ज्यानलाई धरापमा राखेर विरामीको उपचारमा खटिनेहरु विचरा होइनन् । रञ्जिताभित्र कायरताले बास गरेको हुँदो हो त आफ्नो परिवारले भने जसरी उनले खुरुक्क जागिरबाट हात धुन्थिन् । र, यतिबेला आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेको अवस्थामा भेटिँदैनथिन्, सायद ।
रञ्जिता कोरोना संक्रमित भएर आइसोलेसनमा पुगेपछि पनि चुप रहन सकिनन् । संक्रमणको भयले गलिरहेका बेला संक्रमितलाई मानिसहरुले गर्ने विभेदको पराकाष्टाले उनलाई उद्वेलित बनाएको थियो । आफ्नै परिवारलाई सम्झाउन गाह्रो परिरहेका बेला संक्रमितको परिवारलाई समाजले नाकाबन्दी गरेका खबरले उनको मन कुँडाएको थियो ।
त्यसैले त आइसोलेसनमा पुगेको भोलिपल्टै आफ्नो परिचय लुकाएर होइन, थप साहस जुटाएर लेखेको स्टाटस रञ्जिताको प्रोफाइलमा झुल्कियो :
तनाव व्यवस्थापनको बाटो खोजिरहेकी रञ्जिताको दिमागमा जन्मिएका यी अस्वाभाविक प्रश्न विवेकशील मानिसको मथिंगल रन्थन्याउन काफी छन् । र, प्रश्नभित्रै समाज सचेतनाको धारणा व्यक्त छन् ।
‘मैले कुनै गल्ती नै गरेको छैन भने किन आफ्नो परिचय लुकाउनु ?’, स्टाटसबारे रञ्जिताले खुल्छिन्, ‘मैले निश्चित कुनै व्यक्तिको आलोचना गर्नुभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुप्रति प्रश्न उठाउँदै जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेकी हुँ । संक्रमितलाई नराम्रो होइन कि आत्मबल बढाउन माया र प्रेरणा दिनुपर्छ भनेकी हुँ । सानो उदाहरण मात्र बन्न खोजेको हुँ ।’
२७ वर्षीया रञ्जिताले भरतपुर सेन्ट्रल हस्पिटलमा जागिर शुरु गरेको चार महिना नपुग्दै विश्वव्यापीरुपमा कोरोना भाइरसको सन्त्रास भुसको आगो जसरी फैलिएको थियो ।
विश्वका अति विकसित मुलुकले नै कोरोनाको लक्षण र उपचारबारे अनुसन्धान गरिरहेका बेला नेपालका स्वास्थ्यकर्मीलाई भयले छपक्क ढाक्नु नौलो कुरा थिएन ।
उनले आफ्नो परिवार सम्झिइन् । अब यो खबर परिवारलाई कसरी सुनाउने ? हिजो यही दिन नआओस् भनेर अस्पताल नजाऊ भन्ने बाआमालाई आफू संक्रमित भएको सूचना कसरी दिने ? रञ्जिताको मुटुको ढुकढुकी झन् बढ्यो ।
‘दश मिनेटजति शान्त रहेर सोचेँ’ उनी भन्छिन्, ‘अरुबाट थाहा पाउँदा उहाँहरुलाई झन कति असर गर्ला भनेर आफैंले फोन गर्ने निर्णय गरेँ ।’
छोरीको यो अप्रत्याशित खबरले रञ्जिताकी आमाको अनुहार अध्यारियो । आँशु खस्न थाले ।
रञ्जिता सुनाउँछिन्, ‘त्यसपछि आमा बाबा एकदमै डराउनुभयो । एक्लोपनको अनुभुति गर्नुभयो ।’
रञ्जिता भने त्यही दिन आफ्नै अस्पतालको आइसोलेसनमा पुगिन् । एकदिन घरमा बस्दा पनि छट्पटिएर शनिबारसमेत अस्पताल पुग्ने रञ्जितालाई अब दुई कुराले पिरोल्न थाले ।
एउटा कोरोनाको डर । अर्को एक्लोपन ।
‘सुरुमा निकै सास बढेको थियो । आत्तिएँ पनि । तर, त्यहीबेला स्टाफ नर्सको पढाइ सकेपछि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको तस्वीर अघि मैनबत्ती समाएर खाएको बाँचा सम्झिएँ ।
त्यतिबेला जे परी आए पनि पाइलाहरु डग्मगाउन दिँदैनौँ भन्ने बाचा गरेका थियौँ’, रञ्जिताले भनिन्, ‘अनि लाग्यो, हामी बाचाअनुरुप हिँड्नुपर्छ र मेरो कर्तव्य भनेकै सेवा गर्ने हो । त्यसले मभित्र पोजेटिभ तरंग ल्याइदियो ।’
अझै पनि उनका बाबा आमा भने सम्हालिसकेका छैनन् । स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा र समाजले विभेदको आँखाले हेर्दा झन् एक्लोपनको अनुभूति गरेका छन् ।
रञ्जिता भन्छिन्, ‘मैले दैनिकरुपमा बा–आमालाई सम्झाउनुपरेको छ । केही गरी खोकी लाग्ला रोकेर उहाँहरुसँग बोलिरहेकी हुन्छु ।’
उनी आइसोलेसनमा बस्न थालेको सातौं दिन भइसकेको छ । रक्तचाप (बीपी) जाँच्ने सेट र थर्मोमिटर आफैसँग राखेकी छिन् । हरेक दिन आफैं बीपी र ज्वरो नाप्छिन् ।
बिहान–बिहान स्वास–प्रश्वासको व्यायाम गर्छिन् । मोबाइल र शारीरिक व्यायाममा उनको दिन बित्छ । युट्युबमा सन्दीप महेश्वरीको प्रवचनले उनको आत्मबल बढाउन मद्दत गरेको छ ।
दुईवटै खुट्टा नहुनेहरुले पनि कसरी सफलता हासिल गरेका होलान्, म पनि यस्तै साहसी बन्न पाए हुन्थ्यो नि ! तिनै मोटिभेसनल स्पिचहरुले उनको दिमागमा यस्ता विचार आउँछन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले त म बिरामी होइन, एउटा सर्भाइबर मात्र हुँ जस्तो लाग्छ ।’
Posted on August 4, 2019 August 4, 2019 Author Rapti Khabar
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले असारबाट सन्चालन गरेको पाँच महिने आर्थिक सहयोग अभियानमा पार्टीबाट कार्वाहिमा परेका र भगौडाहरुसँग सचेत रहन अपिल गरेको छ । ने.क.पा.ले आगामि कार्तिकसम्म चल्ने अभियानलाई पार्टीले कारबाही गरेका र भगौडाहरू तथा अराजकतावादीहरूले दुरुपयोग गर्नसक्ने खतराप्रति सतर्क रहन अपिल गरेको हो । सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले सन्चालन गरेको एकिकृत […]
Posted on August 1, 2019 Author Rapti Khabar
ठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले नवनियुक्त संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बधाई दिनु भएको छ । भट्टराई पर्यटनमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बुधबार थापाले फेसबुकमार्फत भट्टराईलाई मुरीमुरी शुभकामना दिनुभएकाे हो । सांसद थापाले आफ्नो पुस्ताको राजनीतिकर्मीहरू प्रतिको आशा र विश्वाससँग आफु जोडिएकाे पनि बताउनु भएको छ । थापाले लेख्नु भएको छ- ‘याेगेश भट्टराई दाई […]